Membership - Bawathit Church
Dim Lam Kim
အောက်ပါအချက်များကို သေချာစွာလေ့လာဖတ်ရှုပြီးမှ ပုံစံကိုဖြည့်ပါရန်။
Please Read Carefully to Fill this FORM
ခရစ်တော်အားမိမိကယ်တင်ရှင် အဖြစ်လက်ခံပြီး၊ ဘဝသစ်၏ယုံကြည်ခံယူချက် များကိုလည်း နားလည်လက်ခံပြီး၊ ဘဝသစ်မိသားစု နှင့်အတူ ဘ၀သစ်၏ လှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်ရန် နှင့် မိသားစုဝင်ဖြစ်ရန် ဝိညာဉ်တော်၏နှိုးဆော်မှုခံသဖြင့်မိသားစုဝင်ဖြစ်လာရန်လို အပ်သောအောက်ပါအ ချက် များကိုလက်ခံ ဆောင်ရွက်ပါမည်ဟုသဘောတူပါသည်။
I have Received Jesus as my LORD and Savior and I would like to join the movement of Bawathit Church and to becomeafamily with Bawathit Family to Expand God's Kingdom and I agree to the followings;
(၁)အခြားသောအသင်းဝင်များအားမေတ္တာနှင့်ဆက်ဆံခြင်း၊သူတစ်ပါး၏အတင်းများ ကိုပြောဆိုရန်ငြင်းဆန်ခြင်းနှင့်ခေါင်းဆောင်များ၏စကားကိုနာခံခြင်းများအားဖြင့် ကျွန်တော်ကျွန်မသည်အသင်းတော်၏စည်းလုံးခြင်းကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဝိုင်း ဝန်းလုပ်ဆောင်ပါမည်။ (ရောမ ၁၄း၁၉၊ ၁ပေ ၁း၂၂၊ ဧဖက် ၄း၂၉၊ ဟေဗြဲ ၁၃း၁၇)
1. I will help and protect the Unity of the Church by Treating Others with Love, Refusing to Speak ill of others and obeying the leading of the Bawathit Church leaders. (Romans 14:19; 1Peter 1:22; Ephesians 4:29; Hebrews 13:17)
(၂) အသင်းတော်တိုးတက်ရန်ဆုတောင်းပေးခြင်း၊ခေါင်းဆောင်များအား အစဉ် ဆုတောင်းပေးခြင်း၊အခြားသော မယုံကြည်သူ များအားဧဝံဂေလိ ကိုယ်တိုင် ဝေငှ၍ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း၊ဘုရားကျောင်းသို့ လာရောက်မိတ်သဟာယပြုလာသောသူ များအား နွေးထွေးစွာကြိုဆိုခြင်းများအားဖြင့် အသင်းတော်၏ တာဝန်များကိုဝိုင်းဝန်းထမ်း ဆောင် ပါမည်။ (၁သက် ၁း၁-၂၊ လုကာ ၁၄း၂၃၊ ရောမ ၁၅း၇)
2. I will take on the Responsibility of the Church by Praying for the Church and leaders, Praying for Unbelievers and sharing Jesus with others personally and brining them to our fellowship and welcoming others who join our church warmly.
(၃) မိမိအားဘုရားသခင်ပေးထားသော ဆုကျေးဇူးတော်များကိုသေချာစွာသိရှိ၍ ထိုဆုကျေးဇူးများကိုအသုံးချခြင်း၊ အသင်းတော် ခေါင်းဆောင်များ၏ပြုစုသွန်သင် သင်တန်းပေး၍ အမှုတော်မြတ်ထမ်းဆောင်သူဖြစ်လာရန်မွမ်းမံပြင်ဆင်ခံပြီးအစေခံ ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ခြင်း၊အစေခံကောင်း တစ်ဦး၏စိတ်ဓါတ်များနှင့်အစေခံခြင်းများ အားဖြင့်အသင်းတော်၏အမှုတော်များတွင်ဝိုင်းဝန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါမည်။ (၁ပေ ၄း၁၀၊ ဧဖက် ၄း၁၁-၁၂၊ ဖိလိပိ ၂း၃-၄ နှင့် ၇)
3. I will serve God through Bawathit Church by Discovering my God Given Gift, and by Nurturing my gift, Applying my Gift through the Help of other mature believers in the Church and leader, through those gift I will faithfully serve God through Bawathit Church. (1Peter 4:10; Ephesians 4:11-12; Philippians 2:3-4 and 7)
(၄) အခြေံအုတ်မြစ်အတန်းများကိုပြီးဆုံးတိုင်တက်ခြင်း၊အဖွဲ့ငယ်များတွင်ပါဝင်ခြင်း၊ ဘုရားကျောင်းကိုသစ္စာရှိစွာမှန်မှန်တက်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းဖြောင့်မတ်စွာ အသက်ရှင် ခြင်း သစ္စာရှိစွာအသင်းတော်တွင်ပေးကမ်း လှူဒါန်းခြင်း၊အသင်းတော်နှစ်ပါးတွင် သင်းပြည့် အဖြစ်တစ်ပြိုင်နက်အသင်းမဝင်ခြင်း၊ခရစ်တော်၏သွန်သင်ချက်များနှင့် အညီအသက်ရှင်လျှောက်လှမ်းခြင်းများအားဖြင့်အသင်းတော်၏ အမည်ကောင်းကို ထိမ်းသိမ်းပါမည်။ (တမန်၂း၄၂၊ ဟေဗြဲ၁၀း၂၅၊ ဖိလိပိ ၁း၁၇၊ ၁ကော ၁၆း၂၊ ဝတ်ပြုရာ ၂၇း၃၀)
4. I will preserve and protect the reputation fo the Church by Attending our B1, B2 and B3 Classes, by Participating in Small Groups, by attending Church service Faithfully, by livingalife of integrity, by giving to Church faithfully, by not becomingamember of two churches at one time and living out the teachings of Jesus Christ.
အောကျပါအခကျြမြားကို သခြောစှာလလေ့ာဖတျရှုပွီးမှ ပုံစံကိုဖွညျ့ပါရနျ။
ခရဈတျောအားမိမိကယျတငျရှငျ အဖွဈလကျခံပွီး၊ ဘဝသဈ၏ယုံကွညျခံယူခကျြ မြားကိုလညျး နားလညျလကျခံပွီး၊ ဘဝသဈမိသားစု နှငျ့အတူ ဘဝသဈ၏ လှုပျရှားမှုတှငျပါဝငျရနျ နှငျ့ မိသားစုဝငျဖွဈရနျ ဝိညာဉျတျော၏နှိုးဆျောမှုခံသဖွငျ့မိသားစုဝငျဖွဈလာရနျလို အပျသောအောကျပါအ ခကျြ မြားကိုလကျခံ ဆောငျရှကျပါမညျဟုသဘောတူပါသညျ။
(၁)အခွားသောအသငျးဝငျမြားအားမတ်ေတာနှငျ့ဆကျဆံခွငျး၊သူတဈပါး၏အတငျးမြား ကိုပွောဆိုရနျငွငျးဆနျခွငျးနှငျ့ခေါငျးဆောငျမြား၏စကားကိုနာခံခွငျးမြားအားဖွငျ့ ကြှနျတျောကြှနျမသညျအသငျးတျော၏စညျးလုံးခွငျးကိုကာကှယျစောငျ့ရှောကျဝိုငျး ဝနျးလုပျဆောငျပါမညျ။ (ရောမ ၁၄း၁၉၊ ၁ပေ ၁း၂၂၊ ဧဖကျ ၄း၂၉၊ ဟဗွေဲ ၁၃း၁၇)
(၂) အသငျးတျောတိုးတကျရနျဆုတောငျးပေးခွငျး၊ခေါငျးဆောငျမြားအား အစဉျ ဆုတောငျးပေးခွငျး၊အခွားသော မယုံကွညျသူ မြားအားဧဝံဂလေိ ကိုယျတိုငျ ဝငှေ၍ ဖိတျချေါခွငျး၊ဘုရားကြောငျးသို့ လာရောကျမိတျသဟာယပွုလာသောသူ မြားအား နှေးထှေးစှာကွိုဆိုခွငျးမြားအားဖွငျ့ အသငျးတျော၏ တာဝနျမြားကိုဝိုငျးဝနျးထမျး ဆောငျ ပါမညျ။ (၁သကျ ၁း၁-၂၊ လုကာ ၁၄း၂၃၊ ရောမ ၁၅း၇)
(၃) မိမိအားဘုရားသခငျပေးထားသော ဆုကြေးဇူးတျောမြားကိုသခြောစှာသိရှိ၍ ထိုဆုကြေးဇူးမြားကိုအသုံးခခြွငျး၊ အသငျးတျော ခေါငျးဆောငျမြား၏ပွုစုသှနျသငျ သငျတနျးပေး၍ အမှုတျောမွတျထမျးဆောငျသူဖွဈလာရနျမှမျးမံပွငျဆငျခံပွီးအစခေံ ကောငျးတဈဦးဖွဈခွငျး၊အစခေံကောငျး တဈဦး၏စိတျဓါတျမြားနှငျ့အစခေံခွငျးမြား အားဖွငျ့အသငျးတျော၏အမှုတျောမြားတှငျဝိုငျးဝနျးတာဝနျထမျးဆောငျပါမညျ။ (၁ပေ ၄း၁၀၊ ဧဖကျ ၄း၁၁-၁၂၊ ဖိလိပိ ၂း၃-၄ နှငျ့ ၇)
(၄) အခွေံအုတျမွဈအတနျးမြားကိုပွီးဆုံးတိုငျတကျခွငျး၊အဖှဲ့ငယျမြားတှငျပါဝငျခွငျး၊ ဘုရားကြောငျးကိုသစ်စာရှိစှာမှနျမှနျတကျခွငျး၊ သနျ့ရှငျးဖွောငျ့မတျစှာ အသကျရှငျ ခွငျး သစ်စာရှိစှာအသငျးတျောတှငျပေးကမျး လှူဒါနျးခွငျး၊အသငျးတျောနှဈပါးတှငျ သငျးပွညျ့ အဖွဈတဈပွိုငျနကျအသငျးမဝငျခွငျး၊ခရဈတျော၏သှနျသငျခကျြမြားနှငျ့ အညီအသကျရှငျလြှောကျလှမျးခွငျးမြားအားဖွငျ့အသငျးတျော၏ အမညျကောငျးကို ထိမျးသိမျးပါမညျ။ (တမနျ၂း၄၂၊ ဟဗွေဲ၁၀း၂၅၊ ဖိလိပိ ၁း၁၇၊ ၁ကော ၁၆း၂၊ ဝတျပွုရာ ၂၇း၃၀)
အထက်ပါ အချက်များကို သေချာလေ့လာဖတ်ရှုပြီး အားလုံးကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး သဘောတူပါသလား။ I have read and understood above items and do you agree to them? *
Yes (ဟုတ်ကဲ့သဘောတူပါတယ်။) No (သဘောမတူပါဘူး။
Nameး အသင်းဝင်ကဒ်ပြားအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက် မှတ်ပုံတင်ထဲက နာမည်အတိုင်းရေးပေးပါရန်။ Official name you want to appear on member Card. ကဒျပွားပျေါပျေါစလေိုသညျ့ အမညျအပွညျ့အစုံရေးပေးပါ။ မှတျပုံတငျက နာမညျဆို ပိုအဆငျပွပေါတယျ။ *
Address: လိပျစာအပွညျ့အစုံကိုရေးပေးပါ။ နေရပ်လိပ်စာ အပြည့်အစုံ *
Phone Number: ဖုန်းနံပါတ်။ *
မှတျပုံတငျနံပါတယျ။ NRC No. *
Submit: ဤနေတွင် နှိပ်ခြင်းဖြင့် ပုံစံကို ဘ၀သစ်အသင်းတော်ရှိတာဝန်ရှိသူများထံတင်ပေးပါရန်။
Please Like and Follow us on Facebook.com/bawathitchurch